महिलाहरु यौन सम्पर्क सुरु हुनु अघि के चाहन्छन् ? बाहिरीयो यस्तो तथ्य – हाम्रो ईकोनोमी
महिलाहरु यौन सम्पर्क सुरु हुनु अघि के चाहन्छन् ? बाहिरीयो यस्तो तथ्य
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो ।
यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् ।
महिला शरीर आफैमा संवेदनशील चिज हो । तर पुरुषहरु आफ्नै जस्तो गरेर महिलासँग ब्यवहार गर्छन् । सेक्सको शोधका क्रममा महिलाहरु योनीको माथिल्लो भित्री भागमा हुने स्पर्ष भए निक्कै छिटो आनन्दित हुने पत्ता लागेको छ । चलाउँदा महिला तयार हुने र छिटो चरम सीमामा पुग्ने शोधकर्ताको भनाइ छ । यसका लागि औंलाको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।